A well-known celebrity walked into Waffle House for some dinner one evening and leftavery generous tip. The waitress, who didn’t recognize him at first, “almost hadaheart attack” when she saw how much he left in gratuities.
Kassandra Rhea စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၇၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ စနေနေ့
Kassandra Rhea စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၇၊ အောက်တိုဘာ ၂၊ တနင်္လာနေ့
Donnie Wahlberg စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၇၊ ဇူလိုင် ၁၂၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
Word is spreading that Wahlberg likes waffles and enjoys spreading joy too. Which Waffle House will he venture to next?